ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် Snapdragon4ကိုတင်ပြခဲ့သည် Androidsis
Qualcomm ၏မိုဘိုင်း SoCs များသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လွှတ်သောအထင်ကရစမတ်ဖုန်းများစွာ၏ကျောရိုးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အခြေစိုက် chipmaker သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော GPU များနှင့် modem များနှင့်အတူထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ CPU များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်နာမည်ကောင်းရှိသည်။ အဲဒါကြောင့် လူတိုင်းသည်လက်ရှိ Snapdragon 845 SoC ၏အောင်မြင်စွာဆက်ခံနိုင်မည့်သူများကိုမျှော်လင့်နေကြသည်.
Qualcomm သည်ယခုနှစ်နောက်တွင်အနည်းငယ်သာရှိနေသော်လည်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုကဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံး 7nm chipset ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ထိုနေ့တွင်ကုမ္ပဏီသည် Qualcomm Technology Summit တွင်အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပလိမ့်မည်။ တရုတ်စာနယ်ဇင်း ၀ န်ထမ်းများကအောက်ပါဖော်ပြချက်များဖြင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သုံးရက်ကြာကျင်းပမည့်ပွဲကိုဟာဝိုင်ယီတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်နှင့်ဖိတ်ကြားချက်တွင် Qualcomm Snapdragon 821 ပါသော Xiaomi VR ကိရိယာလည်းပါရှိသည်။
Snapdragon 8150 ၏ specs များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လက်ရှိပြောဆိုမှုမှာဖြစ်သည် tri-cluster CPU ၏အဓိကဒီဇိုင်းနှင့်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်ဆင်တူ 980။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက် chipset ကို မကြာသေးမီက AnTuTu အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ၎င်းသည်မည်သည့်အခြား Android ထုတ်ကုန်တွင်မတွေ့မြင်ရသည့်အချိန်အားလုံးအမြင့်ဆုံး ၃၆၂,၂၉၂ ရရှိခဲ့သည်။ အနီးစပ်ဆုံးချဉ်းကပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော CPU မှာ Huawei ၏ Kirin 362,292 ဖြစ်ပြီးအမှတ်အသားမှတ် ၃၁၁,၈၄၀ ရရှိခဲ့သည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် Black Shark Helo တွင် Snapdragon 980 ပြီးလျှင် ၃၀၁,၇၅၇ မှတ်ဖြစ်သည်။ (ရှာဖွေရန် - ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု၊ AnTuTu Benchmark အရ).
အဓိကဗိသုကာမျှော်မှန်းထားသည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 2,84 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သောကြီးမားသော core တစ်ခု၊ အလယ်အလတ် core သုံးခုသည် 2,4GHz နှင့်နောက်ဆုံးတွင် ၁.၇၈ GHz နှုန်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် Core လေးခုရှိလိမ့်မည်။ အတွင်းပိုင်း GPU သည် Adreno 640 ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်၎င်းသည်ယခင် version ထက် SD20 ၏ Adreno 630 ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုကောင်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Qualcomm ၏ Snapdragon4ကိုဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင်ပြသမည်
ကြိုးမဲ့ပရင်တာထည့်သွင်းနည်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို Android တွင်ပုံနှိပ်နည်း